ငြိမ်းချမ်း| December 31, 2012 | Hits:4,882
| | ဘင်္ဂလာ-မြန်မာနယ်စပ် ခြံစည်ရိုးကို ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ခြမ်း လေမူစရီ ကျေးရွာအနီးမှ မြင်ရပုံ (ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းချမ်း/ ဧရာဝတီ)
ARF အစည်းအဝေးမှာ တောင်တရုတ် ပင်လယ် နဲ့ နျူကလီးယား အရေး ဆွေးနွေးထိုင်းနှင့် တရုတ် ဆက်သွယ်မည့် မြန်နှုန်းမြင့် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်မည်ပုသိမ်မြို့နှင့် ဂျပန် ရှီဇုအိုကမြို့ ညီအစ်မမြို့တော်ဖြစ်ရေး ဆွေးနွေးထိုင်းနိုင်ငံတွင်း တရားမ၀င် နေထိုင်သူများ ဖမ်းဆီးမှုတွင် မြန်မာ အများဆုံးပါဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် အရာရှိ ပျောက်ဆုံးမှု ဖြေရှင်းရန် မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆို
Tayoke January 1, 2013 - 4:18 pm The fence may be able to fend off the animals, not human beings. Thein Sein better sends his soldiers to guard the border instead of attacking the Kachins.
Reply ohnmar January 2, 2013 - 6:17 pm သေသေချာချာကာရမယ့်ခြံစည်းရိုးတွေကိုတော့ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးမကာဘူး။
Reply Stone Cold January 6, 2013 - 11:55 am I love your comment, Ohnmar. I share your view.